समाचार - ती क्लासिक बत्तीहरू कसरी डिजाइन गरिएको छ?
सजावटी बत्तीहरूको डिजाइनमा स्वतन्त्रताको ठूलो डिग्री हुन्छ। व्यावसायिक प्रकाशको विपरीत, जसले अप्टिकल गुणस्तरको अन्तिम प्राविधिक खोजी गर्दछ, सजावटी बत्तीहरूको डिजाईनले बत्तीको आकारको सुन्दरतालाई मात्र होइन, प्रकाश प्रभावको वातावरणमा पनि जोड दिन्छ। बिभिन्न अनुप्रयोग परिदृश्यहरूमा, डिजाइनरहरू प्राय: सजावटी बत्तीहरूको आकार वा अप्टिक्समा जोड दिन्छन्। तसर्थ, सजावटी बत्ती डिजाइन गर्दा, डिजाइनर "आकार" र "प्रकाश" को अनुपात बुझ्नु पर्छ।
१. थेशैप मुख्य रूप हो, उज्यालो सहयोगी हो
माथिको तस्वीरको भित्ता बत्तीमा यसको आकारमा रिच डिजाइन भाषा छ। एकीकृत चिल्लो काँचको आकारले प्रकाश स्रोत लुकाउँछ। बत्ती भित्तामा स्थापित छ। यो केवल भित्ता बत्ती मात्र होइन किनकि यो कलाको ज्यामितीय शैली हो।
२.लाइट मुख्य आधार हो, फारम पूरक हो।
पानीको थोपा खस्दै गइरहेको छ - मोमेन्टो झूमर समूह। मोमेन्टोको प्रेरणा प्रकृतिको दृश्यबाट आउँदछ: पानीको थोपाहरू बिस्तारै तिनीहरूमा टिप्न लाग्दा त्यत्तिकै जम्मा हुन्छन्, मानौं उनीहरूले वरिपरिको दृश्य झल्काउँदै सम्पूर्ण ज्योति ग्रहण गरेका छन्। मोमेन्टोको गिलास lampshde पानी ड्रप हो कि ड्रिप को बारे मा छ। एक प्रकाश स्रोत यसको माथि झुण्डिएको छ। जब प्रकाश "पानीको थोपा" बाट जान्छ, प्रकाश अपवर्तित र तितरबितर हुन्छ, शान्त पानीको सतहमा पानीको थोपा खसेझैं जमीनमा बत्ती र अँध्यारो हलो बन्छ। यसमा लहरहरु रमाईलो छन्।
F.Form र प्रकाश सँगसँगै।
हामीले सुरुमा भनेझैं, सजावटी बत्तीहरूको डिजाइन स्वतन्त्रता ठूलो छ। फारम र प्रकाशको एक पक्षमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको अतिरिक्त, डिजाइनरहरू सन्तुलन, मिश्रण र एक अर्कामा पूरक हुन सक्छन्।
माथिको तस्विरमा, डिजाइनरले एक भव्य आकार सिर्जना गरेन, तर पातलो गोलाकार धातुको औंठी प्रयोग गरी एक समान चमकदार फ्रिस्टेड बल लम्प्शेडलाई समात्दछ। यो कला कार्यमा, समान रूपबाट चमकदार फ्रिस्टेड बल लम्प्शेड आकृतिको मुख्य शरीर हो, प्रकाशको मुख्य भाग हो, र आकार र प्रकाश एकीकृत हुन्छन्।
पोष्ट समय: नोभेम्बर २ 23-२०२०